Telecommunications Station Anundgård wabeka phantsi – Xa ndikhangela emva kwinkulungwane ezadlulayo | Holmbygden.se
posted on 16 EyoMdumba, 2017 yi Holmbygden.se
Anund Manor exchange ifowuni ekhoyo
Ngoku Telecommunications Station Anundgård inalo "best ngaphambi komhla". Njengenxalenye yokumana ngaphandle kwenethiwekhi yobhedu kwilizwe lonke ngoku Telia wagqiba ukuba stationen ur drift efter 100 år i aktiv tjänst. Masixole ichaphazela zonke lwababhalisi babe imirhumo zeefoni ekhaya nge jack ngefowuni, nokuba Telia okanye omnye umqhubi.
iminyaka 2012 kwabhengezwa ukuba Telia wayeza wabeka phantsi isikhululo ngefoni Loviken. Ngoku isikhululo uthungelwano i Anundgård leyo ke kuye wabonwa imihla okusemandleni alo. Nezinye iindlela zonxibelelwano kunokuba ngalo uthungelwano zobhedu endala sele kusetyenziswa kakhulu-and-ngakumbi ke ukugcina Telia Group iminyaka ethile ngoku likwiphulo sichitha zonke ii-yefowuni endala ukuba ayisekho ingqalelo inzuzo. Anundgård Isikhululo iya ivaliwe ngenxa yokulungileyo 2018-04-03.
izinketho ezintsha, kubandakanya Holm Fiber
Kuba abo ngoku ifowuni ekhaya nge uthungelwano zobhedu ukuba ufuna ukugcina iindlela ezahlukeneyo. Ukuba uza kufumana ifayibha efakiweyo nge "Holm Fibre" (Obs! Report apha!) ukuze ukwazi ukusebenzisa nayiphi na umqhubi kukuba ukhethe Servanet (oya kulakhela network ifayibha kunye Holm Fibre).
Enye ukuba zeefoni ekhaya phezu ifayibha, ngayo “zeefoni ekhaya nge network yeselula”. Kwi website yayo, Telia isandla allmän information med frågor och svar ukuvalwa REFERENCE ("Networks Future") yaye sina egna erbjudanden Ukuba ugqiba ekubeni uhlale (okanye ukubhalisela) Telia.
ngenye indlela, Telekområdgivarna inkonzo umthengi carrier-cala aya kukunceda ukuba ingasonjululwa yaye oko kufuneka ucinge ngaphambi kokuba uthenge imirhumo.
Anund Farm lokuqala Exchange ngomnxeba kwaba ngale sakhiwo, yona iminyaka ethile kwaku ishishini.
Imbali phantsi konxibelelwano sefowuni i Anundgård
I yokuqala exchange yefoni manual i Anundgård yakhiwe kwi 1910s emva kwexesha. Isikhululo xesha 50m ukuya ngasempuma kunaniselwano yefoni yanamhlanje (700m ise empumalanga ibandla). Stationsbeteckningen ngelo xesha "Östbyn", libya station Kwakhona esisigxina i Anundgård. I "shift manual" yabonelelwa kakhulu umlindi Holm uqobo, Maria "Maja" Hjerpe (ozelwe Viklund, 1912).
emhlabeni 1920 Xa zeefoni Holm isanda yayo, oko, oko uyise foster Maja ka-Pelle Haglund owenza utshintsho, kodwa sele 13 eminyaka ubudala, ukuba Maia ekwafuneka ukuthatha phezu ibaleka. Wayebanyamekela utshintsho gear incwadi yesandla kwi Holm de isikhululo wokuqala ngokuzenzekelayo kunye izixhobo yomnxeba mihla ngakumbi socofo wathabatha phezu umsebenzi Holm, phakathi kwe 60 ubudala.
Umzekeliso isikhululo exchange 40 kwababhalisele st wakhangela ngeli xesha. Elifana i Manor, Anund nezixhobo ndandiqala ukumjonga.
Phambi kokuba matshini basebenza ukwenzela ukuba xa ufuna ukuba kubizwe naphi na ukuqala cranking ifowuni kwaye baphakamise nefoni. Ekubeni waphendula Maja "Anundgård" kwelinye icala ize emva koko bacele ukuba ezihlanganiswa. Kusenokwenzeka ukuba oku kunokwenzeka ukuba lilalele intlebendwane ngamaxesha athile kwi ilali ngokusebenzisa lo msebenzi.
Umfanekiso t.v. wabona enye ngokwemvumelwano yengqesho Maja isebenzisa loo minyaka, "Contract ngokuphathelele kulawulo kwisitishi lotshintshiselwano kunye isixhobo ikhwelo kuluntu kwaye Imiyalezo uhambo" ukusuka 1935. Apho, phakathi kwezinye izinto ukuba isikhululo wayeza kuba söckendagar evulekileyo (ngeentsuku zeveki) e 8-20. Ngaphandle kwezo iiyure kwafuneka ukuba bakhangele ezinye iindlela zonxibelelwano ukuba ufuna ukuya kumbamba umntu. NgeCawa, isikhululo yavalwa inkonzo kusasa kwi 10-13 kunye isidlo ngeeCawa 16-18. Ngaphezu koko, imifanekiso engezantsi uyakwazi ukubona ukuba intlawulo yomsebenzi njengoko Umlawuli isikhululo ezonxibelelwano waba 40 Mqhayi / unyaka kunye nokubhalisa. Yaye ngokutsho 'ucingo' njengoko inani lwababhalisi ku 1935 njengoko 15 st, eya kubakho umvuzo wenyanga oyi-ezinqabileyo 50 kr.
(Nqakraza kwi imifanekiso ukuze bandise)
Kuba abo bangazange babe umnxeba ekhaya ngoko waphuma kwakhona tyelela i-ofisi ziguquka ukuba ubufuna ukuba ndifowunele. Kwi indlela yokuphuma ekunokufuneka uzihlawule ngokushiya 15 penny kwi umpu omnyama njengoko kubonakala ku kumfanekiso ongezantsi. Lo mfanekiso efanayo kuyabonakala incwadi kwisikhululo Sweden xa uloba iminyaka wathandana 1919. on page 120 sifumana 'Östbyn ".
Maja wayephila ubomi ofisi yefoni yokuqala. Ekupheleni kwenkulungwane ye-40 wazakhela swi manual 100m empumalanga entsha. Namhlanje intombi yakhe ohlala kwisikhululo ngocingo endala, Unyana wakhe uhlala yesibini endala.
Anund Manor yesibini ukuguqukela iziko. Ngaphaya window ukuya ekunene yaba iiseyile manual, igumbi bashiya, ungase bakubize xa waba ifowuni yakho ekhaya
Ngeminyaka yee-60s kwakhiwa exchange yefoni oluzenzekelayo Holm lokuqala (Esi sakhiwo alisekho), eli xesha phakathi ezimbini ngasentla. Ekuqaleni-80 Yakhiwa kwisikhululo lweengcingo kusetyenziswa de namhlanje. Kwiminyaka / ekupheleni-90, kudala ngaphambi kokuba YouTube, Facebook ne Google wabona ukukhanya, kwaba ngenxa isikhululo yomnxeba ezininzi Holmbor wadibana yakhe yokuqala kunye Internet.
Uninzi BENDISOLOKO desktop computer eyakhelwe “56 kbits-modem” yaye loo nto iye eqhagamshelwe jack phone. Kwaye yobabalo yabe isithatha ifowuni ngoxa ehleli ulinde imizuzu emihlanu ukuba iphepha Web kufuneka ukulayishwa phezulu! Mhlawumbi wadlula lokuqala e-mail Anund Farm iziko lakho utshintshayo?
Ngelishwa kubahlali Holm, kangangokuba akazange efika isikhululo kufuneka ziphuculwe kunye kakhulu ngokukhawuleza ADSL-tekniken Laphehlelelwa ekuqaleni 00 yee-, xa kungekho Telia okanye nawuphi na umsebenzisi wakubona kukuhle. ekwindla 2005 yaba bethwele kwisilayidi Anundgård esikolweni aze nazo wabuza Anundgårdsbor ukuba banomdla wokujoyina, amakhaya leyo 15 wenza. Kwiminyaka ethile kamva, nkqu ubuchwepheshe 3G mobile, nto leyo ethetha ukuba abantu abaninzi bashiya ukuxhumana abo endala yokudayala-up Internet nge jack phone.
emva cishe 40 Iminyaka yenkonzo iya Anund Farm isikhululo yomnxeba kutshanje ukuba kuyekiswa
Kwakuza namhlanje kuba iminyaka emininzi ukususela nabani lokugqibela surfed nge "56 kbits imodem" nge jack ngefowuni, kanti kwi imeko yangoku isekhona indawo 40 kwababhalisele usebenzisa lo jack sefowuni zeefoni ekhaya station Anundgård.
izinqumo ngoDisemba 2016: Aid imvume yokuba ifayibha ku Holm! Holmbygden.se
Holm Fiber Association Economic. Sayina apha!
Funda ngaphezulu malunga ukuvalwa / "womnatha elizayo". Telia.se
4G-master kwada Holmbygden! Holmbygden.se
Utshintsho ku ngocingo- kunye nothungelwano broadband, Post & Telecom Agency
Telia sikude esisigxina zeefoni in Loviken 2012, Holmbygden.se